စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - Buddhatrends
ဒီ website Buddhatrends အားဖြင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်တစ်လျှောက်လုံးစည်းကမ်းချက်များ "ကျနော်တို့", "ကျွန်တော်တို့ကို" နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့၏" Buddhatrends ရည်ညွှန်း။ Buddhatrends အားလုံးအသုံးအနှုန်းများ, အခြေအနေများ, မူဝါဒများနှင့်ကဒီမှာဖော်ပြထားသတိပေးချက်များသင့်ရဲ့လက်ခံမှုကိုအပေါ်သို့အေးစက်အားလုံးသတင်းအချက်အလက်, tools များနှင့်သင်ဤ site မှမရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုများ, သုံးစွဲသူအပါအဝင်, ဒီ website ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စတွင် Buddhatrends ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရိုက်တာများ, အရာရှိများ, ဝန်ထမ်းများ, affiliates, အေးဂျင့်များ, ကန်ထရိုက်တာ, နိုင်ငံတကာ, ပေးသွင်းသူများ, ဝန်ဆောင်မှုပေးသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရကိုမဆိုဒဏ်ရာ, ဆုံးရှုံးမှု, ပြောဆိုချက်ကို, ဒါမှမဟုတ်မဆိုတိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်စကားမစပ်, ပြစ်ဒဏ်ခတ်, အထူးများအတွက်ထိုက်ရကြလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ် , န့်အသတ်ရှုံးနိမ့်အမြတ်အစွန်းမရှိဘဲ, သင့်ထံမှပေါ်ထွက်လာသော, ဒေတာ, အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်, ဒါမှမဟုတ်မဆိုအလားတူပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, (ပေါ့ဆမှုအပါအဝင်) စာချုပ်အခြေစိုက်ဖြစ်စေ, တရားမျှတမှုမရှိခြင်း, တင်းကြပ်တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဆုံးရှုံးပျောက်ဆုံးငွေစုဝင်ငွေဆုံးရှုံးခဲ့ရအပါအဝင်မည်သည့်မျိုးလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆို၏အသုံးပြုမှုကိုဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ဝယ်ယူဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုမှမဆိုလမ်းအတွက် related အခြားမည်သည့်အရေးဆိုမှုအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆိုအမှားများကိုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်, ကန့်သတ်မရ, ဒါမှမဟုတ်မဆို အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်) ၏အသုံးပြုမှုကို၏ရလဒ်အဖြစ်မြှုတ်မဆိုကြင်နာဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကြံပေးလျှင်ပင်, posted မှတဆင့်ကူးစက်သော, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါစေတော်မူ၏။ အချို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုဖယ်ချန်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှု၏န့်အသတ်ခွင့်မပြုပါဘူးသောကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ယူမှုကိုဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာကန့်သတ်ခံရကြလိမ့်မည်။
သငျသညျကျိုးကြောင်းဆီလျော်အပါအဝင်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်ဝယ်လိုအားအနေဖြင့်အန္တရာယ်ကင်း, အန္တရာယ်ကင်း Buddhatrends နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘ, ခွဲများ, affiliates, မိတ်ဖက်, အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, အေးဂျင့်များ, ကန်ထရိုက်တာ, လိုင်စင်ရ, ဝန်ဆောင်မှုပေး, ကန်ထရိုက်, ပေးသွင်းသူများ, နိုင်ငံတကာနှင့်ဝန်ထမ်းများ, indemnify ကာကွယ်ရန်နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူ ကြောင့်မှသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်သူတို့ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများဤသတ်မှတ်ချက်များသည်သင်၏ပြိုပျက်ရာ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ် third-party ၏အခွင့်အရေးသည်သင်၏ချိုးဖောက်မှုထဲကပေါ်ထွက်လာသောဆို Third-party ဖွငျ့ရှေ့နေများ '' အခကြေးငွေ။
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျန်ဆောင်မှုများပေးမထွက်ရဆိုသီးခြားသဘောတူညီချက်များဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် 5900, rue de Verdun Montreal ကွိဘက်, CA H4H 1M4 ၏ဥပဒေများနှင့်အညီဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအဆက်အသွယ်ပုံစံဖိုသုံးပြီးပို့ရပါမည်